दलित शब्दको उत्पत्ति ! « Media for all across the globe
दलित शब्दको उत्पत्ति !
बौद्धिक क्षमता भएको व्यक्तित्व कहिले जात, लिङ्ग, रंग, नश्लिय, भाषावाद, प्रांतवाद, कला-संस्कृत, धार्मिक, भौतिक, भौगोलिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, अमीर गरीब, मानव छुवाछूत जस्तो विकृतिको कुरो गर्दिन। तर, केही बाहुन नेतृत्व को DNA मा छुवाछूतको भयंकर Cancer फैलिएको छ। कुकुरको पुच्छर बारहों महिना सीधै गरेपनि बांगोको बांगो जस्तो।
वर्णाश्रम व्यवस्था को चातुर्थवर्ण व्यवस्था अनुसार बाहुन, छेत्री, वैश्य अनि शुद्र जातिय श्रेणी बनाएको छ। यस् व्यवस्था अनुसार मानवले मानव माथी जातिय छुवाछुत को विभेद गर्छन्। एवटा कुरो बुझ्न् पर्ने छ यदी २१औं सदीमा किसान, जवान, चिकित्सक (Doctor) अनि शिक्षिकले विभेद जस्तो जघन्य अपराध गरे कस्तो होला ? बाहुन किसानले अनाजको उत्पादन बाहुन जाति लाई मात्र गरे दलित कुन तरिकाले बांच्न गर्लान?
दलित किसानले खेती आफ्नो समुदाय को लागि गर्छ भने बाहुन जाति आफ्नो बालबालिकालाई कुन तरिकाले पालन पोषण गर्न सक्छ ? यदी देश र सिमानाको रक्षा गर्ने जवानले आफ्नो समुदायको सुरक्षा गरे राष्ट्रको अन्य समुदायको, शरणार्थी अल्पसंख्यक र विदेशी पर्यटकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको लिनु सक्छ ? यदी, चिकित्सकले जात हेरेर औषधि उपचार गरे कतिपय जातिको मान्छे अकाल मृत्यु वा निरंतर रोगी रहनु सक्छन ? यदी शिक्षकले पाठशालामा बाहुन, छेत्रीका बालबालिका अनि दलित विपन्न बालबालिकालाई अलग-अलग बसाई पढाई गराए कस्तो होला ? जातको आधारमा पढाई हुनुसक्छ ? के पाठ्यक्रममा जातको आधारमा Syllabus छ ? यदी छ भने तुरंत अध्यादेश ल्याउनु पर्छ, निष्कासन गर्नुपर्छ।
आजको पीढीलाई विज्ञानको जानकारी चाहिएको छ। पुरातनवादी रुढीबादी मनगढंत कहानी पढ्नु छैन। हिन्दु धर्मको आधारभुत अनुसार कर्म को आधारमा जात हो भन्छन। येस्तो हो भने किसान , जवान, चिकित्सक र शिक्षक एवटा पेशागत जात हुनुसक्छ ? के अब आगामी दिनमा येस्तो थर लगाउन पाईन्छ ? के हामी बाहुन, छेत्री, वैश्य, शुद्र हुनुभन्दा किसान, जवान, चिकित्सक, शिक्षक जस्तो हुनुसक्दैनौं ?
किसान, जवान, चिकित्सक र शिक्षक को के जात भनिसकिन्छ ? हरेक धर्म जोड्ने काम गर्छन् तर हिन्दु धर्मका ठेकेदारहरु जातको नाममा विभेद गर्दैय मानवसभ्यताको अन्त गर्न सार्हिएका देखिन्छन। कालांतरबाट आजसम्म मृत्युदरले क्रमशः विभेद कम हुन्दै जान्छ।
मान्छेको मृत्युले विचार मान्छेको साथमा मर्दै जान्छ। अब रोकथाम जरुरी छ। सबैको साझा किसान, जवान, चिकित्सक अनि शिक्षक जस्तो बन्नु जरुरी छ।